Kedu ọnọdụ maka ịghọ ezigbo onye zụrụ ngwá ụlọ?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta ngwá ụlọ siri ike, ị ga-ebu ụzọ ghọta osisi nke ọma, ma nwee ike ịmata ọdịiche dị n'etiti elm, oak, cherry, eucalyptus na osisi ndị ọzọ site na usoro osisi, yana ọdịiche na ọnụahịa dị n'etiti osisi a na-ebubata na osisi ụlọ;Kedu ebe osisi ebubata si abịa, north o...
Kedu ihe na-eme onye na-ebubata ihe a pụrụ ịdabere na ya?
site admin na 22-06-03
SS Wooden na-achikota njirimara ndị a nke ndị na-ebubata ihe dị elu: 1 Mmepụta ikike Ọ dị oke mkpa ịchọta ndị na-eweta ngwaahịa ndị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ndị a chọrọ.N'ozuzu, naanị ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji chọpụta ikike mmepụta nke ndị na-ebubata ihe bụ ịga leta ndị na-ebubata m ...
Kedu ka esi achọta ndị na-ebubata ihe kwesịrị ekwesị na nke dị elu?
site admin na 22-06-02
Atụmatụ ịzụ ahịa na-adịgide adịgide dị oke mkpa maka ike uto ụlọ ọrụ.Otu ụlọ ọrụ nwere ike ịbawanye uru ma belata mfu mgbe ọ chọtara ndị na-ebubata ihe dị elu.N'agbanyeghị na enwere puku kwuru puku ndị na-ebubata ngwaahịa, ịhọrọ ndị na-eweta ngwaahịa na-adị mfe mgbe ị matara kpọmkwem ngwaahịa ...
Okwu dị mma nke a na-elegharakarị anya na ịzụrụ ngwá ụlọ
Ka nkwakọ ngwaahịa ụlọ na-enwekwu kọmpat, ka onye na-azụ ihe ga-enwe ike ịchekwa ego n'ụgbọ njem.Ya mere, ngwá ụlọ KD na-aghọwanye ewu ewu n'etiti ụlọ ọrụ e-azụmahịa, ụlọ ahịa ngwá ụlọ, ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa.Ngwá ụlọ KD na-eji ọtụtụ MDF laminated pan ...
Kedu ka onye na-azụta ngwá ụlọ si ekpebi àgwà ngwaahịa ahụ?
site admin na 22-05-16
1. Na-esi ísì.A na-eji ogwe osisi mee ihe eji eme ihe, dị ka osisi MDF.A ga-enwe isi nke formaldehyde ma ọ bụ agba, n'agbanyeghị ihe ọ bụla.Ya mere, ị nwere ike ikpebi ma ngwá ụlọ bara uru ịzụta site na imi gị.Ọ bụrụ na ị na-esi isi ísì mgbe ị na-abanye n'ime furnitu ...
Kedu ihe ọghọm nke arịa ụlọ panel?
1.Non-environmental protection E nwere ụfọdụ ndị na-emepụta ngwá ụlọ na-emepụta ihe ndị dị ala dị ka particleboard ma ghara ịlanarị ngwá ụlọ niile, nke dị mfe ịhapụ formaldehyde nke na-emerụ ahụ mmadụ, nke na-adịghị agbaso iwu nchebe gburugburu ebe obibi....
Kedu uru dị na arịa ụlọ panel?
1. Nchekwa gburugburu ebe obibi.Akụrụngwa maka ngwá ụlọ panel na-abụkarị bọọdụ mmadụ mere (MDF Board) nke sitere na osisi fọdụrụnụ na nke na-eto ngwa ngwa, nke na-emepụta oke ọhịa.2. Nnukwu okpomọkụ na-eguzogide.Ọtụtụ ndị na-emepụta ngwá ụlọ na-ahọrọ otu ụdị osisi MDF.Okpomọkụ dị elu tupu ...
Kedu ihe bụ arịa ụlọ?
Ihe atụ nke ngwá ụlọ panel bụ ngwá ụlọ nke e ji mbadamba nkume na ngwaike niile na-eji ihe ịchọ mma mee ihe.Ọ nwere njirimara ndị bụ isi nke ikepụpụ, ọdịdị na-agbanwe agbanwe, ọdịdị ejiji dị ka mkpa onye ọrụ siri dị, ọ dịghị mfe ịmegharị, àgwà kwụsiri ike, aff ...
Kedu ihe bụ PVC laminate & ebe a ga-eji ya?
site admin na 20-07-16
Kedu ihe a na-eji laminate eme ihe n'elu ụlọ ime ụlọ?The laminations eji na ime ụlọ ngwá ụlọ elu na-agụnye PVC, Melamine, Osisi, Ecological akwụkwọ na acrylic wdg Ma ndị kasị eji na ahịa bụ PVC.Ihe mkpuchi PVC bụ mpempe akwụkwọ laminate multi-layered dabere na Polyvinyl chloride.Emere...
MDF – Ọkara njupụta Fiberboard
MDF – Ọkara njupụta Fiberboard Ọkara njupụta Fibreboard (MDF) bụ ngwaahịa osisi arụpụtara nke nwere elu dị larịị yana isi njupụta edo edo.A na-eme MDF site n'ịkwatu osisi siri ike ma ọ bụ softwood n'ime eriri osisi, jikọta ya na wax na ihe nkedo resin na ịmepụta ogwe site n'itinye elu ...
Ihe ngosi Canton dị n'ịntanetị - ngosi ngosi mbubata na mbupu nke China nke iri na abụọ na asaa
Online Canton Fair – Ihe ngosi mbubata na mbupụ nke China nke 127 nke Ministri Azụmahịa nke PRC ekpebiela na a ga-eme mmemme Canton nke 127 n'ịntanetị site na June 15 ruo 24, 2020. Dị ka onye na-ahazi Canton Fair, China Foreign Trade Center, na-ahụ na dị iche iche. nkwadebe na-aga nke ọma na l...